Aung Win Hein (Noble): July 2011
စာအုပ်ဆိုင် အတွင်းသို့ လူငယ်တစ်ယောက် ၀င်လာပြီး
“ ဟုတ်ကဲ့….ဘာစာအုပ်များလဲ ရှင် ”
မိန်းမ တွေအပေါ် ဘယ်လို လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားသလဲ ”
” စိတ်ကူးယဉ် စာပေများ ”
ဆိုတဲ့ စင်မှာ ရှာကြည့်ပါရှင်”
တကယ်အဆင့်မြင့်တဲ့ အသိဉာဏ်ကို လိုချင်ရင်
အဖက်ဖက် က သန့်ရှင်းတဲ့
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိပါတယ်။
လှတာကို ဖန်တီးထားတဲ့ သူတွေကို သိပ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
A thing of beauty is joy for ever;
but still will keep
A bower quiet for us,
Full of sweet dreams,
အဖြစ်ကို ဘယ်တော့မှ ရောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။
ဒါပေမယ့် ငါတို့အတွက် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နားခို
လှတာဟာ စိတ်ကို အနားရစေတယ်။
လှပတဲ့စိတ်ဟာ ကောင်းစွာ အိပ်ပျော်စေတယ်။
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ အေးချမ်းမှုကို
အရင်တုံးကထက် ပိုပြီးတော့ အဆင့်မြင့်တဲ့
ပိုပြီးအဆင့်မြင့်တဲ့ အလှကို မြင်လေလေပဲ။
Only the morning gate of beauty
Leads you into the land of truth.
တစ်နေ့တော့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ ကိုအေးကိုကပြောတယ်။
ဘယ်ြမို့က မယ် ၊
ဘယ်တိုင်းက မယ် ၊
သူဘာ မယ်ဆိုတာ ပြောပြတယ်ကွ၊
” ပါးကျိုးမယ် ” တဲ့
အင်ဒီယားနားမှာ သိုးတွေမွေးထားတဲ့ လယ်သမားတစ်ဦးရှိပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းရဲ့ခွေးက သူမွေးထားတဲ့ သိုးတွေကို လာပြီးကိုက်သတ်နေတဲ့အတွက်
အဲဒီလို ပြဿနာကြုံခဲ့ရင် ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ တရားစွဲဆိုတာတွေ၊ ခြံစည်းရိုးကာတာတွေ၊
ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း လာကိုက်သတ်တဲ့ခွေးကို သေနတ်နဲ့ပစ်တာတွေ
ဒါပေမယ့် အဲဒီနည်းတွေကို လယ်သမားက မသုံးခဲ့ပါ။
အိမ်နီးချင်းကလေးတွေကို လက်ဆောင်အဖြစ် ပေးလိုက်ပါတယ်။
အိမ်နီးချင်းတွေမှာ သိုးလေးတွေ ပိုင်ဆိုင်လာတဲ့အခါမှာတော့
သူတို့ဟာ ခွေးတွေကို လွှတ်မထားတော့ပဲ ကြိုးတွေနဲ့ချည်နှောင်ထားပါတော့တယ်။
" ကြက်တူရွေးလေး အိန်ဂျယ်..."
မိန်းကလေး သုံးယောက် ကျောင်းသွားတက်ရာ
အဲဒီကြက်တူရွေးဟာ ထိုမိန်းကလေး သုံးယောက်
အိမ်ရှေ့ဖြတ်သွားတိုင်း အရောင်၃ ရောင် ကို ရွတ်ဆိုလေ့ရှိတယ်။
အဲဒီ မိန်းကလေး သုံးယောက်လဲ သတိထားမိလာတယ်။
တနေ့ မှာတော့ သေချာနားထောင်ကြည့်လိုက်ရာ
လို့ ရွတ်နေတာ ကိုကြားမိလိုက်တယ်။
မိန်းကလေး တစ်ယောက်က သွားစဉ်းစားမိတာကတော့
ဒီအရောင်ဟာ သူမရဲ့အတွင်းခံဘောင်းဘီ အရောင် ပါလား
ဒါပေမယ့် ကျန်နှစ်ယောက်က လက်ခံ ဖို. အင်တင်တင်ဖြစ်နေကြသေးတယ်။
သုံးယောက်စလုံး အနက်ရောင် အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ ကိုယ်စီဝတ်ဆင်ခဲ့ရာမှာ
အားလုံး အင်မတန်အံ့အားသင့် ခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီထဲက မိန်းကလေးတစ်ယောက် က
‘ဟေ့ ငါ့တို. မနက်ဖြန် ဒီကြက်တူရွေး ကိုပညာပြရအောင်’
လို့ဆို ကာ သုံးယောက်လုံး အတွင်းခံ ဘောင်းဘီ မ၀တ်ပဲ
ကြက်တူရွေး က အဲဒီသုံးယောက်ကို မြင်တော့
ခဏတာ စဉ်းစား အပြီး
" လှတဲ့စိတ်နဲ့ ကြည့်..."
(ဆရာတော် ဦးဇောတိက )
အချိန်မရွေး၊ အခါမရွေး၊ သတိနဲ့နေရတာ
မှာလည်း တတ်နိုင်သလောက် သတိလေးကပ်ပြီး၊
သိပြီး တော့ လုပ်ပါတယ်။
( ရသလောက် သတိပဋ္ဌာန်တရားလေးနဲ့နေပါ )
အရည်အချင်းတွေကို အမြင့်မားဆုံး၊ အကောင်းဆုံး
ဖြစ်အောင် ထုတ်ဖော်လိုက်တဲ့ လူပဲ။
ဆရာဝန်ဆိုရင် လူနာကို ရောဂါပျောက်ကင်းအောင် ဆိုပြီးတော့
မေတ္တာ၊ စေတနာ၊အပြည့်နဲ့ကုသပေးလိုက်တယ် ဆိုရင်
စိတ်အေးချမ်းမှု၊ မြင့်မြတ်မှုရဖို့က တော့
တရားအားထုတ်လို့ ပိုပြီးသတိ၊ သမာဓိ ၊တွေ
ရိုးသားမှုအပြည့်အဝ ရှိမှပဲ ဖြစ်တယ်။
အသိဉာဏ်ရှိဖို့ဆိုတာ အသိရှိမှ ဖြစ်မယ်။
ချစ်တယ်ဆိုရင် သူ့ကို ဘယ်သူနဲ့မှ
ကိုယ်ကျိုးအတွက် အသုံးချဖို့ မရည်ရွယ်ပဲ
အတ္တမှာ လုံခြုံမှုဆိုတာ မရှိဘူး။
အကြောက်ပြေဖို့ ကို နည်းမျိုးစုံ
ကိုယ့်လောက လှချင်ရင် သူတစ်ပါးအတွက်လည်း
ပဲ သူတို့လောကကို လှအောင်